Raw Hydrafinil (9-Fluorenol) ntụ ntụ (1689-64-1) - Phcoker
Hydrafinil Raw (9-Fluorenol) ntụ ntụ (1689-64-1)
Hydrafinil ntụ ntụ іѕ mgbakwunye anaotropic dị ike nke Modafinil. Hydrafinil, makwaara… ..
Hydrafinil Raw (9-Fluorenol) ntụ ntụ (1689-64-1) video
Hydrafinil Raw (9-Fluorenol) ntụ ntụ (1689-64-1) Nkọwapụta
Hydrafinil Raw (9-Fluorenol) uzuzu (1689-64-1) bụ ihe ọṅụṅụ na-aba n'anya nke ndị na-agagharị. N'ịdịdị kasị dị ịrịba ama, fluoren-9-ol ma ọ bụ 9-hydroxyfluorene, ndị hydroxy dị na mgbachi carbon n'etiti ihe abụọ benzene yiri mgbaaka. A pụrụ ịgbanwe mmiri hydrofluorone na fluorenone site na ikuze. Ọ bụ ihe na-acha ọcha na-acha ọbara ọbara na ụlọ okpomọkụ.
N'otu oge ahụ, Raw Hydrafinil (9-Fluorenol) ntụ ntụ bụ onye na-akwalite ndị mmadụ na-ehi ụra, na-egbochi ịra ụra na inattention. Ọ bụ otu okwu na ọgwụ ọjọọ nke modafinil (nke a makwaara dị ka Provigil) - onyinye nke ndị na-anya ụgbọ elu nke Airforce jiri rụọ ọrụ ogologo oge ka ha mụrụ anya. Hydrafinil (aka 9-Fluorenol) bụkwa akwụkwọ eugeroic nootropic nke yiri Modafinil. Ebubere ya dị ka ihe nyocha iji kwalite ntụrụndụ na nche. N'ihi ọrụ nrụpụtara ya dịka onye na-arụ ọrụ eugeroic, ọ na-aghọwanye ewu ewu n'etiti ndị ọrụ nootropics. N'ụzọ na-adọrọ mmasị, ndị ọrụ na-akọ na ọ bụghị mmetụta na-akpali akpali karịa Modafinil, mana ikike dị ukwuu iji kwalite nche. Ihe ndị ọzọ a kọrọ na-agụnye mmelite nke uche, mmụba na-arịwanye elu, mmetụ ndị na-ezighị ezi, ịrụ ọrụ nke ọma na ikike ịmụta.
Hydrafinil Raw (9-Fluorenol) ntụ ntụ (1689-64-1) Smmezi
Product Name Hydrafinil Raw (9-Fluorenol) ntụ ntụ
Chemical Aha Hydroxyfluorene;
9-Fluorenol; Fluoren-9-ol; 9-Fluorenyl Mmanya; 9-Hydroxy-9H-fluorone; 9-Hydroxyfluorene;
Klaasị ọgwụ ọjọọ Aromatics, Environmental, SMART Drugs
molekụla Fnhazi C13H10O
molekụla Wasatọ 182.222 g / mol
Nkịtị Monoisotopic 182.22 g / mol
Mgbu Point 153-156 ° C
esi ebe 275.62 Celsius C (ike siri ike)
Sume Chloroform (Slightly), Methanol (Slightly)
Hydrafinil (9-Fluorenol) Antinye Eji ya na nkà mmụta sayensị, ngwaahịa ọgwụgwọ, nri, ihe ọṅụṅụ, ihe ntanetị, ihe ndị dị ndụ na mmiri ọgwụ na ndị ọzọ.
raw Hydrafinil (9-Fluorenol) ntụ ntụ (1689-64-1)
Hydrafinil Raw (9-Fluorenol) uzuzu (1689-64-1) bụ ihe na-aba n'anya na-abaghị uru. N'ịdịdị kasị dị ịrịba ama, fluoren-9-ol ma ọ bụ 9-hydroxyfluorene, ndị hydroxy dị na mgbachi carbon n'etiti ihe abụọ benzene yiri mgbaaka. A pụrụ ịgbanwe mmiri hydrofluorone na fluorenone site na ikuze.
Hydrafinil (9-Fluorenol) ntụ ntụ (1689-64-1) Mechanism of actions?
Enweghi ike igosi usoro ihe omuma. Otú ọ dị, e nwere usoro ihe omume ole na ole. Na mbu, a kwenyere na Hydrafinil (9-Fluorenol) ntụ nwere ike ịrụ ọrụ dị ka onye na-adịghị ike dopamine rehibitor, nke pụtara na ọ na - eme ka ọkwa nke dopamine neurotransmitter.
Nke abuo, a kwadoro na Hydrafinil (9-Fluorenol) na-eme dị ka onye na-akwado ihe ntanetị 5-HT6. Ndị natara 5-HT6 nọ na usoro nhụjuanya nke etiti (CNS) ma ọ na-egosi na nchịkọta ha nwere ike iduga nwelite nke arụmọrụ dị iche iche na ọtụtụ ihe mmụta dị iche iche. Tụkwasị na nke ahụ, serotonin na usoro ya na-arụ ọrụ dị oke mkpa ma nchịkwa ma na-akpa àgwà. Ya mere, ụfọdụ n'ime mgbanwe dị nro dị nwayọọ ndị a kọrọ gbasara iji Hydrafinil (9-Fluorenol) bụ ndị usoro a.
uru of Hydrafinil (9-Fluorenol) ntụ ntụ (1689-64-1)
Ịbawanye anya na wakefulness
Belata ike ọgwụgwụ na ike ọgwụgwụ
Ike nke uche
Ịdị elu elu
-atụ aro Hydrafinil (9-Fluorenol) ntụ ntụ (1689-64-1) Ọgwụgwọ
N'ọnọdụ ọ bụla, ọ dị mma mgbe ọ bụla ịmalite na obere mkpụrụ ahụ ma jiri nwayọ mụbaa ya ozugbo ị marala mmetụta ya. Ụdị Hydrafinil uzo a na-emebu bụ 50 na 100 mg otu ugboro kwa ụbọchị, usoro ọgwụgwọ ọ bụghị karịa usoro a.
mmetụta of Hydrafinil (9-Fluorenol) ntụ ntụ (1689-64-1)
Mmetụta nke Hydrafinil ntụ ntụ dị. Ndị a na-agụnye isi ọwụwa, na nsị. A kọọkwara mkpesa nke ọnwụ nke agụụ.